Dargaggoo Malkaamuu: Qabxii olaanaan eebbifamee dorgommii kalqaanis mo'ate - BBC News Afaan Oromoo
Kan dhalatees naannoo Kibbaa godina Shakkaa lafa maqaan addaa Kallacha jedhamutti. Barataa kabajaan qabxii olaanaan (great distinction) eebbifameefi dorgommii kalaqaa barana Solve IT jedhamuun gaggeeffame ture kan mo'ate dargaggoo Malkaamuu Taaddasaati.
"Bakkan dhaladheetti kan dhaghamu sagalee konkolaataa qofa ture. Isayyu konkolaataa guddaan wayita achiin darbu," jedha.
Maatiin Malkaamuu qote bultoota. Inniifi obboloonni isaa haalli jirenyaa kamiyyu osoo isaan hindanqiin akkuma barattoota baadiyyaa bu'aa bahii hedduu keessatti barnoota isaanii hordofaniiru.
Akka jedhuttis manni barnotaa itti baratan daqiiqaa 40 hanga 50 milaan deemsiisa. Kana malees achi gahanii deebii'uuf tabbaafi irrangadee qaba.
Dargaggeessa umurii 17 abbaa kalaqoota 27 ta'e
Fageenya daandiin alattis alkaniin ka'anii hojiin mana keessaa (sawwan elmu, loon bobbaasuu, kkf) rawwachutu irraa eegama ture. Kana hunda raawwachuu garuu Malkaamuu kaayyoosaa irraa boodatti hindeebiifne.
Haala akkasiin baratee kutaadha gara kutaatti darbuuf sadarkaa tokkoffaa kan jalaa fudhate hinturre. Isaan boodas Yunivarsitii Baahir Daariitti gosa barnootaa 'Mechanical Engineering' barate. Bara sanattis sadarkaa yunivarsitiin qabxii olaanaa galmeessuun kabajaan eebbifame.
Haalawwan beekumsa isaa ittiin guddifatu keessaayis warra biraa qo'achiisuu, barsiisuufi leenjiisuu hojiiwwan isaa dursaan eeramaniidha.
Kan beeku warra kaaniif yoo qoode ofiin akka baratu hima.
"Abbaan kiyya sababii hanqina dinagdeetiin osoo hinbaratiin hafan,'' kan jedhu Malkaamuun, haaloosaanii inni akka baasuuf abbaansaa imaanaa akka itti kennan dubbata.
Sababii kanaafuu abbaafi obbolaansaa waan qaban hundaan bira dhaabbatu. "Ani qabxii galmeessuu kiyyatti abbaankoo baayyee gammadaniiru. Gammachuusaas jaalleewwansaa waliin qooddachuuf amma qophii taasisaa jiru," jedha.
Amma ammoo dorgommii hojii kalaqaa Solve IT qopheessee ture irratti waan mo'ateef gammachunsaanii dachaa ta'eera.
Hojiin kalaqaas meeshaa maxxansaa abbaa rog-sadiitti (3D Printer) dha. Kunis yaada pirojaktii waraqaa heebba yunivarsitiif qopheesseedha.
Hojiiwwan kalaqaa hojjataman kan rakkoolee hawaasaa hiikan ta'u qabaatu jedhee kan amanu Malkaamuun, naannoo yunivarsitii itti barateetti pirintarri abbaa rog-sadii waan hinjirreef barattoonni wayita pirojaktiisaanii hojjachuuf rakkatan hubate.
Haata'u malee, maashinni kun gabaarra ni jira. Malakaamuun akka jedhuutti gatiinsaa qaala'aa waan ta'eef, salphaafi akka garaatti dhaabbilee tajaajilaa keessatti hinargamu. Rakkina kana hiikuuf ammoo yaadni pirojaktii isaa fala akka ta'e dubbata.
Keessattuu dizaayinoota gamoo akkasumas wixineewwan kan biraa kophiin fakkii kaasuun alatti fakkii ijaarsaa rog-sadii akka sirriitti mullatuutti maashinni maxxansu kun. Yaadni isaas rakkinuma kanarraa dhufeef.
Isaan boodas hiriiyyota isaa yunivarsitii lama, Manbaruu Zalaqaafi Malkaamuu Faqaaduu waliin ta'uun hojii kalaqaa kana cimsuu eegale. Dorgommichaan hojiiwwan kalaqaa 63 marsaa dhumaatiif darban keessaa tokko ta'uu danda'e.
Leenjiifi muuxannoo Faawundeshinii Solve IT'n kennamu argachuufis carraa baneef. Achumaanis hojii kalaqaasaa ittiin dorgome haala gaariin fiixaan akka baasuuf karra saaqeef. Kanaafuu pirojaktiin '3D Printer' Malkaamuufi hiriyyoonni isaa sadarkaa tokkoffaan xumurame.
Pirintarichi kan hojjatamees meeshaalee naannootti argaman salphaan yoo ta'u, maatiinsaafi yeroo yunivarsitii barataa tureetti gorsaa isaa kan turan Obbo Henook deeggarsa akka taasisaniif hima.
Maashina '3D Pirtnter'
Pirojaktii kanaan ogganaa garee kan ture Malkaamuun akka jedhuutti, maashinichi argannoo haaraa miti.
Biyya alaatii hanga qarshii kuma 40n bitachu akka danda'amu odeeffannoo haa qabaatu malee, baasiin hojii kalaqaasanii kan waliigalaa yoo tilamaamamu birrii 6,500 qofa itti fudhate.
Maashinichi fakkii akka maxxansuuf hajajamu waan akka peennaa fakkaatuun [CNC Plotting], karaa mala cararaatiin yeroo tokkon raawwachuu danda'a.
Kana malees, maashinichi yeroo tokkichaan afaanoota kompitaraa sadii [C++C, Language and Machine language] dubbisu danda'a.
"Pirojaktiichi cimaadha. Beekumsa dameewwan oggummaa baayyee gaafata," kan jedhu Malkaamuun, fakkeenyaafis beekumsa Mechanical Engineering, Electrical Engineering, beekumsa Electronics, software, Computer coding' fa'i beekuu akka gaafatu hima.
Innis hiriyyootasaa gosawwan dame kanaa baratan waliin ta'uufi inatarneetii irraa dubbisuun kaayyoo isaaf gahuu dubbata.
"Ambaasaadaroonni Imbaasiiwwan Ameerikaafi Jaappan kalaqa isaa kana dowwachuun akka hojjatu mirkanneeffataniiru," jedha Malkaamuun.
Dorgommii bara kanaatiin dargaagoowwan 2,800 kan galamaa'an yoo ta'u, isaan keessaa 160 dorgommii marsaa dhumaatiif gahaniiru. Isaan dhummarra qaqabanis gareefi dhunfaan hojiiwwan kalaqaa 63 dhiyeessaniiru.
Isaan keessaa pirojaktiin Malkaamuu sadarkaa tokkooffaan xumureera. Dhaabbata iCog Lab irraa badhaasni birrii kuma 100 kan kennameef yoo ta'u, gara fuula duraattis abbootii qabeenyaa biyya keessaafi biyya alaa waliin ta'un hojii kalaqaa kana hojiirra oolchuuf akka hojjatu Malkaamuun ni dubbata.
Sirni badhaasa isaa bakka qondaaltonni motummaa olaanoo, ambaasaadaroonni Imbaasii Ameerikaafi Jappaan, akkasumas keessummoonni itti argamaniitti dhiheenya kana raawwachuunsaa ni yaadatama.